साथीहरूसँग घडी 6
एक तत्व मानव को स्टेज मुनि एक इकाई हो; एक तत्व को शरीर चार तत्वहरु मध्ये एक बाट बनेको हुन्छ। तसर्थ शब्द मौलिक। को अर्थ वा तत्वहरु संग सम्बन्धित। रोजिक्रुसिअन्स भनेर चिनिने माध्यम मध्यकालीन दार्शनिकहरूले ती तत्त्वहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गरे र प्रत्येक वर्गलाई उनीहरूले पृथ्वी, पानी, वायु र आगोको रूपमा व्यवहार गर्ने चार तत्त्वहरूमध्ये एउटासँग सम्बन्धित गरे। अवश्य पनि यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि यी तत्वहरू हाम्रो स्थूल तत्त्वहरू जस्ता छैनन्। उदाहरणका लागि, पृथ्वी हामी वरिपरिको केहि देख्दैन, तर हाम्रो तत्त्व पृथ्वीमा आधारभूत तत्व हो। रोजिक्रसियनले पृथ्वीका तत्वहरू, gnomes नाम दिएका छन्; पानी को, undines; ती, हावा, sylphs को; र आगोको ती, सलामन्डरहरू। जब कुनै तत्वको कुनै अंशलाई मानवको तीव्र चिन्तनले दिशा दिन्छ, यो विचारले यसको प्रकृतिको तत्त्वको विशेषतामा देखा पर्दछ र तत्त्वबाट छुट्टै अस्तित्वको रूपमा देखा पर्दछ, तर जसको शरीर तत्त्वको हो। बिकासको यस अवधिको अवधिमा मानव विचारले सिर्जना नगरेका ती तत्त्वहरूले उनीहरूको अस्तित्वलाई ग्रहण गर्‍यो, विगतको विकासवादको प्रभावका कारण। एक तत्व को निर्माण दिमाग, मानव वा विश्वव्यापी को कारण हो। पृथ्वी तत्वहरू भनेर चिनिने तत्त्वहरू आफैंमा सात वर्गका हुन्, र ती ती हुन् जुन गुफा र पहाडहरूमा, खान र पृथ्वीका सबै ठाउँमा बस्छन्। तिनीहरू यसको खनिज र धातुहरूको साथ पृथ्वीका निर्माणकर्ताहरू हुन्। अन्नाइनहरू स्प्रि ,हरू, नदीहरू, समुद्रहरू र वायुको ओसिलोपनामा बस्दछन्, तर पानी, वायु र आगो तत्वहरूको संयोजन ले वर्षा उत्पन्न गर्दछ। सामान्यतया कुनै पनि प्राकृतिक घटना उत्पादन गर्न तत्त्वका दुई वा बढी कक्षाको संयोजन लिन्छ। त्यसैले क्रिस्टलहरू पृथ्वी, हावा, पानी र आगो तत्वहरूको संयोजनले बनिएको हो। यो बहुमूल्य पत्थर संग छ। यो sylphs हावा मा, रूखहरु, खेतहरु को फूलहरु, झारहरु मा, र सबै तरकारी राज्य मा बस्ने। सलामन्डर आगोको हो। एक लौ एक सलामन्डर को उपस्थिति को माध्यम बाट अस्तित्वमा आउँछ। आगोले सलामन्डरलाई देखिने बनाउँदछ। जब त्यहाँ ज्वाला छ हामी सलामन्डरको एक भाग देख्छौं। आगो तत्त्वहरू सबै अत्यधिक जटिल हुन्छन्। यी चारले आगो, आँधीबेहरी, बाढी र भूकम्प उत्पादनमा एक अर्काको साथ मिल्दछन्।
'मानव तत्व' भनेको के हो? के यो र तल्लो दिमागमा कुनै भिन्नता छ?
मानव अवयव त्यो इकाई हो जुनसँग मानिस सम्बन्धित छ जब ऊ पहिलो अवतारमा अवस्थित हुन्छ र जससँग ऊ आफ्नो शरीरको निर्माणमा प्रत्येक अवतारसँग सम्बन्धित छ। यो दिमागका सबै अवतारहरूमा रहन्छ जबसम्म यो दिमागसँग लामो सम्बन्धबाट आत्म चेतनाको चिंगारी वा किरण प्राप्त हुँदैन। यो त अब मानवीय, तर तल्लो मन हो। मानव मूलबाट लिंग लिंग आउँछ। मानव तत्त्व भनेको नै मेडम ब्लाभत्स्कीको "गुप्त शिक्षा" मा रहेको छ जसलाई "भारिसाद पित्री" भनिएको छ, वा "चंद्र पूर्वज", जबकि मानिस, अहंकार, सूर्यको छोरा, सौर वंशको अग्निष्ट पित्रीको हो।
त्यहाँ एक मौलिक नियंत्रण इच्छाहरू, अत्यावश्यक शक्तिहरू नियन्त्रण गर्ने, अन्य शारीरिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, वा मानव मौलिक नियन्त्रणले यी सबै नियन्त्रण गर्दछ?
मानव तत्त्व यी सबै नियन्त्रण गर्दछ। लिंग शारिरा अटोमेटन हो जसले मानव तत्त्वका चाहनाहरू पूरा गर्दछ। भारिसाद पित्री शरीरको मृत्युको साथ मर्दैन, लिंग लिंग जस्तो गरी। लिंग शारिरा, यसको बच्चा, प्रत्येक अवतारको लागि यसको बाट उत्पन्न हुन्छ। भारिषद आमाको रूपमा हुन् जुन पुनजन्म दिमाग वा अहंकारले काम गरीरहेको छ, र यस क्रियाबाट लि sha्ग शारिर उत्पादन हुन्छ। मानवीय तत्वले प्रश्नमा उल्लेख गरिएका सबै कार्यहरू नियन्त्रण गर्दछ, तर प्रत्येक प्रकार्य एक अलग मौलिक द्वारा गरिन्छ। शरीरका प्रत्येक अ of्गको तत्त्वले केवल ती जीवहरू जान्छ र नियन्त्रण गर्दछ जुन त्यो जीव बनाउन जान्छ, र यसको प्रकार्य प्रदर्शन गर्दछ, तर अरू कुनै अ organ्गको कुनै कार्यको केही पनि जान्दैन, तर मानव तत्त्वले देख्छ कि यी सबै कार्यहरू गरिन्छ। र harmoniously एक अर्को सम्बन्धित। शरीरको सबै अनैच्छिक कार्यहरू जस्तै सास, डाइजेस्टि,, पसिना, सबै मानव तत्व द्वारा नियन्त्रित छन्। यो मानव तत्व को भौतिक शरीर मा buddhic समारोह हो। मा सम्पादकीय "चेतना," शब्द, खण्ड। I, पृष्ठ 293, भनिन्छ: “पदार्थको पाँचौं अवस्था भनेको मानव दिमाग हो वा म-म हुँ। असंख्य युगहरूको क्रममा, अविनाशी परमाणु जसले अन्य परमाणुहरूलाई खनिजमा, तरकारी मार्फत र जनावरहरूसम्म डो guided्यायो, अन्तमा माटोको उच्च अवस्था प्राप्त गर्दछ जुन एक चेतना प्रतिबिम्बित हुन्छ। एक व्यक्तिगत इकाई हुनु र भित्र चेतना को प्रतिबिम्ब हुनु, यो सोच्छ र आफैलाई म को रूपमा बोल्छ, किनकि म एक को प्रतीक हो। मानव इकाई यसको निर्देशनमा एक संगठित पशु निकाय छ। पशु इकाईले यसको प्रत्येक अंगलाई विशेष प्रकार्य प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्दछ। प्रत्येक अ of्गको अस्तित्वले यसको प्रत्येक कोषहरूलाई निश्चित कार्य गर्न निर्देशन दिन्छ। प्रत्येक सेलको जीवनले यसको प्रत्येक अणुलाई बृद्धि गर्न मार्गदर्शन गर्दछ। प्रत्येक अणुको डिजाइनले यसको प्रत्येक परमाणुलाई व्यवस्थित रूपमा सीमित गर्दछ, र चेतनाले प्रत्येक परमाणुलाई आत्म-सचेत हुने उद्देश्यले प्रभावित गर्दछ। परमाणु, अणु, कोष, अंग, र जनावरहरू सबै दिमागको दिशा अन्तर्गत छन् - पदार्थको आत्म-सचेत अवस्था - जसको कार्य सोच्दछ। तर दिमागले आत्म-चेतना प्राप्त गर्दैन, जुन यसको पूर्ण विकास हो, जबसम्म यो इन्द्रियबाट प्राप्त हुने सबै चाहना र प्रभावहरूलाई वशमा राख्दैन र नियन्त्रणमा नलगाउन्, र चेतनमा सम्पूर्ण विचार केन्द्रित हुन्छ जुन आफैमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। शरीर जसरी अग्निश्वात्स पित्री मनको धागो आत्मा हो। "के त्यहाँ कुनै आधारभूत इच्छाहरु लाई नियन्त्रणमा राख्छ?" होइन। कामा रुपाले अहंकारसँग यस्तै सम्बन्ध राख्दछ जसरी मानव मूलसँग लि sha्गा शरिराले गर्दछ। केवल लिंगा शरीरा शरीरको स्वचालित हो, जबकि काम रुपा अशांत इच्छाको स्वचालित हो जसले संसारलाई सार्दछ। संसारको चाहनाहरु कामा रुपा सार्छ। कामा रुपामा प्रत्येक उत्तीर्ण मौलिक हडतालहरू। त्यसैले लिंग शारिरा सारियो र मानव आंशिक, काम रूप, वा अहंकारको आवेग वा आदेश अनुसार शरीर सारियो।
के हो चेतना कार्य र शरीर को बेहोश प्रकार्य दुवै नै समान नियंत्रण?
त्यहाँ बेहोस कार्य वा कार्य जस्तो कुनै चीज छैन। मानव शरीर को कार्यहरु वा कार्यहरु को बारे मा सचेत हुन सक्छ को लागी, शरीर को अवयव वा समारोह को अध्यक्षता मूलभूत सचेत छ, अन्यथा यो काम गर्न सक्दैन। समान तत्वले सधैं शरीरको सबै कार्यहरू वा कार्यहरू गर्दैन। उदाहरणका लागि, मानव तत्त्वले समग्रमा शरीरको अध्यक्षता गर्दछ यद्यपि यो रातो रक्त कोषको अलग र व्यक्तिगत कार्यको बारेमा सचेत नहुन सक्छ।
सामान्य विकसित संस्थाहरूमा सामान्य तत्वहरू छन्, र तिनीहरू सबैजना वा विकासको क्रममा पुरुषहरू बन्नेछन्?
उत्तर दुबै प्रश्नहरूको हो हो। मानिसको शरीर सबै तत्वहरूको लागि स्कूल घर हो। मानिसको शरीरमा सबै तत्त्वका सबै वर्गहरूले आफ्ना पाठहरू र निर्देशनहरू प्राप्त गर्दछन्; र मानिसको शरीर एक महान विश्वविद्यालय हो जहाँबाट सबै एलिमेन्टलहरू उनीहरूको डिग्री अनुसार स्नातक गर्छन्। मानव तत्त्वले आत्म-चेतनाको डिग्री लिन्छ र यसको फलस्वरूप, अहंकारको रूपमा, अर्को तत्त्वको अध्यक्षता गर्दछ जुन मानव हुन्छ, र सबै तल्लो तत्त्वहरू, जसरी शरीरमा अहंकारले गर्दछ।